कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श, माधवले भने– आफुले गरेको काम मात्रै राम्रो हुने ? - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » अन्तरवार्ता » कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श, माधवले भने– आफुले गरेको काम मात्रै राम्रो हुने ?
२०७७ बैशाख १९ गते ०५:०० मा प्रकाशित
बैठकमा विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएन । मौखिक रुपमा सम्बोधन गरेका दुवै अध्यक्षले पार्टी र सरकारका बारेमा केन्द्रीत भएर धारणा राखेका थिए ।
प्रचण्डभन्दा अगाडि सम्बोधन गरेका ओलीले सरकारलाई पार्टीले अपेक्षित सहयोग नगरेको गुनासो गरे भने प्रचण्डले सरकार एक्लै हिँड्न खोज्दा समस्या भएको टिप्पणी गरे । ओलीले पार्टीले सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षको जस्तो व्यवहार गरेर घेरावन्दीमा पार्ने प्रयास भएको गुनासो गरे ।
लकडाउनले आम्दानी गुमेपछि ऋण लिन [...]